I-Android yawo wonke umuntu; Yini i-bootloader? | Izindaba zamagajethi
AmaVillamandos | | Android, General, I-Telephony
Sonke noma cishe sonke sikwazi kahle lokho Android Kuyinto uhlelo lokusebenza lwama-mobiles namathebulethi akhiqizwe yiGoogle. Njengamanje isetshenziswa kakhulu emhlabeni kulesi sigaba samadivayisi futhi isondele kakhulu kunguqulo yayo entsha ebona ukukhanya kosuku emakethe. Okwamanje isivele itholakalela amatheminali we-Nexus, ngaphansi kwegama lekhodi le-Android N. Ku-Google I / O yokugcina sifunde imininingwane emisha yesoftware futhi sazi nokuthi kungekudala izotholakala ngendlela esemthethweni.
Ukuze silethe i-Android emhlabeni, sizoqala uchungechunge lwama-athikili lapho sizochaza khona eminye imiqondo esemqoka yesoftware yakwaGoogle. Namuhla Sinqume ukuqala ngokuchaza ukuthi yini i-bootloader, ukuthi uzwe kaningi kakhulu nokuthi mhlawumbe awukacacisi ukuthi ikuphi noma yenzelwe ini. Impela akuwona umqondo osendaweni yomphakathi futhi ngeshwa akulula ukuwuqonda nokuwuqonda.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe nge-Android nange-bootlader, qhubeka ufunda futhi ulungele ukusondela kancane kuhlelo lokusebenza oluncanyelwa iningi labasebenzisi be-smartphone nabathebhulethi.
1 Yini iBootloader?
2 Kuyini ukusebenza kweBootloader?
3 Kungani abakhiqizi bevimba i-bootloader?
4 Kuyalulekwa yini ukuvula i-bootloader?
Kuchazwe ngendlela elula singasho ukuthi i-bootloader yiyona igama elithola ngesiNgisi ingxenye ebaluleke kakhulu yohlelo lokusebenza lwe-Android, futhi ngumphathi ovumela ukuthi idivayisi iqale. Lokhu kunesibopho sokulayisha i-Linux Kernel nohlelo lokusebenza lwe-Android, yingakho ingenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zesoftware.
Ngaphandle kwe-bootloader ayikho i-Android, ngaphezu kwanoma yini ngoba ngeke sikwazi ukuqala futhi ngakho konke lokhu sizofunda okuthile kabanzi ngale bootloader yedivayisi.
Kuyini ukusebenza kweBootloader?
Njengoba sesishilo, i-bootloader ingenye yezingcezu eziyisisekelo zanoma iyiphi idivayisi enesistimu yokusebenza ye-Android. Ngaphandle kwalokho abaningi bethu abangakukholwa umkhiqizi ngamunye uphethe ukwenza i-bootloader yabo hhayi iGoogle. Futhi ngukuthi umkhiqizi ngamunye wamadivayisi weselula noma amaphilisi kufanele athuthukise awakhe ngoba kufanele asebenzisane ne-hardware yedivayisi ngayinye.
Manje kuza izingxenye eziyinkimbinkimbi ukuqala ukuqonda izinto futhi lokho ukuthi ngokushesha nje lapho sivula i-bootloader yenza izivivinyo eziningana ukubheka ukuthi ikernel nokululama kukuphi, izindlela ezimbili esingazithatha lapho siqala idivayisi yethu.
Njalo lapho sicindezela inkinobho yamandla kudivayisi yethu, ilayisha i-Android ngokukhetha i-kernel ukuze uyiqale. Ngakolunye uhlangothi uma sicindezela inhlanganisela ethile yokhiye, i-bootloader izolayisha ukutakula, okuzoba esinye isici esizoxoxa ngaso ngokujulile kwesinye isihloko ngoba kungathakazelisa ngempela.
Kungani abakhiqizi bevimba i-bootloader?
Njengoba sesishilo, iningi labakhiqizi emakethe livimba i-bootloader ukuze kufundwe kuphela uhlelo lokusebenza lwe-Android olufakwa ngumenzi, ngaleyo ndlela kuvimbele umsebenzisi ukuthi akwazi ukwenza izinguquko ngendlela ecishe ibe lula yesoftware. Kalula nje, i-bootloader isetshenziswa ngabakhiqizi njenge- uhlelo lokukhiya olungekho emthethweni lwe-ROM.
Ukuze noma yimuphi umsebenzisi akwazi ukufaka iROM engekho emthethweni kudivayisi, kufanele siqale ukuvula i-bootloader, ngokulahleka okulandelayo kwewaranti. Ezinye izinkampani ezifana ne-Samsung zikhokha inzalo ekhethekile kulesi sici futhi ngomsebenzi obizwa nge-KNOX Void Warranti kubala izikhathi lapho umsebenzisi akhanyisa khona isoftware ngaphandle kwesiginesha yakwa-Samsung, ngakho-ke ayikho emthethweni.
Kwesinye isikhathi kuyamangaza ukuthi abakhiqizi bavimba i-bootloader, kepha ngalezi zinkinga zesikhathi esizayo ziyagwenywa futhi ngaphezu kwakho konke lokho abasebenzisi benza ushintsho bezibeka engcupheni yokuthi ezimweni eziningi asibazi ubukhulu bazo.
Kuyalulekwa yini ukuvula i-bootloader?
Ngaphambi kokuphendula umbuzo onikeza isihloko sale ndatshana, kufanele kucaciswe ukuthi ukuvula i-bootloader akuhlangene nokuvula i-terminal, ngokwesibonelo ukuze ukwazi ukusebenzisa i-SIM khadi evela enkampanini ehlukile. Imvamisa lokhu kwaziwa njengokuvula idivayisi, into engahlangene nesihloko esibhekene naso namuhla.
Futhi lokho okwaziwa ngokuthi "ukhula lwenkohlakalo egcwele" akuhlangene ne-bootloader, yize njengoba kuvame ukudideka abasebenzisi abaningi.
Ukubuyela embuzweni osusondele, impendulo ingaba nokufundwa okuningana, futhi ukuthi ezikhathini eziningi akukhuthazwa kuphela ukuvula i-bootloader, noma ngabe iwaranti ingalahleka, kepha kubalulekile ukuyenza ukuze ufake i-ROM, esingayidinga ngandlela-thile noma enye.
Vele, impendulo enengqondo yalo mbuzo kufanele ibe nguHhayi ozwakalayo futhi lokho ukuthi ngalokhu sizolahlekelwa yisiqinisekiso futhi nekusasa ledivayisi yethu yeselula noma ithebhulethi kuzobuzwa. Kuyiqiniso futhi futhi kufanele siveze ukuthi isiqinisekiso esinikezwa abakhiqizi abahlukene ezimweni eziningi ngeke sisisize kakhulu.
Uhlelo lokusebenza lwe-Android luyinkimbinkimbi futhi lugcwele ama-nooks nama-crannies ukuthi iningi labasebenzisi alithandeki futhi alihambelani, kepha kunani elikhulu labasebenzisi lingaphezu kokuthakazelisa. I-bootloader ingenye yalawo ma-nook kanye nama-crannies, angazuza kakhulu, yize njengoba sesibonile ngezingozi ezilandelayo.
Ubuwazi lonke ulwazi esabelane ngalo nawe namuhla futhi oluzungeze lokho okubizwa ngokuthi yi-bootloader?. Sitshele ukuthi unolwazi olungakanani nge-Android nokuthi kube yini ukuhlolwa okwenzile ngedivayisi yakho ngohlelo lokusebenza lwe-Google. Ngalokhu ungasebenzisa isikhala esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma enye yezingosi zokuxhumana nabantu lapho sikhona nalapho sizojabula ukuxoxa nawe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Android yawo wonke umuntu; Yini i-bootloader?
UJuan Aparicio kusho
Ngine-samsung s2 gt-i9100 efakwe kuyo i-cyanogenmod 13
Kungathakazelisa kakhulu ukuthi ubhale mayelana nalawa ma-roma kumatheminali we-1g
Ngibe nenkinga enkulu yokufaka ama-gapps
Phendula uJuan Aparicio
Izicelo eziyi-7 ongathola ngazo noma iyiphi i-radar futhi uvikele inhlawulo